Muuqaal Daawo: Masjid 800 oo sano jiray oo la qarxiyey
Milateriga Ciraaq ayaa shaaciyey Fiidiyow ay sheegeen in uu muujinayo masaajid qadiimi ah oo ku yaalla Moosil oo la yiraahdo Al Nuuri oo la burburinayo. Fiidiyowga waxaa ka muuqda munaarad uu masjidka caan ku yahay oo janjeerta, taasoo la qarxinayo.
Daawo: Masjid 800 oo sano jiray oo la qarxiyey
Muuqaal Sida looga ciiday Gaarisa
Ciida Soonfureed ayaa dunida Muslimka badankeeda laga wada ciiday, waxaanay Muslimiintu isugu soo baxeen garoomada waawayn ee magaalooyinka waawayn iyo barxadaha tuulooyinka iyo miyigiga si ay ugua qayb galaan salaadda ciidda.
Sida looga ciiday Gaarisa
Muuqaal Daawo: Weerar lagu qaaday masaajid ku yaalla waqooyiga London
Nin ayaa dhintay toban kalena dhaawac ayaa soo gaaray ka dib markii "weerar argagixiso" lagu qaaday dad ka soo baxay masaajid ku yaalla magaalada London
Muuqaal Daawo: Dadkii ka badbaaday weerarkii Muqdisho oo ka hadlay argagax ay la kulmeen
Tirada dhimashada qarixii ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa gaartay 25 qof. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa si kulul u cambaareeyay weerarkan oo ay Shabaabku sheegteen
15 Juunyo 2017
Daawo: Dadkii ka badbaaday weerarkii Muqdisho oo ka hadlay argagax ay la kulmeen
Muuqaal Wiil Soomaali ah oo ka badbaaday dabka
Wiil Soomaali ah oo ka badbaaday dabka
Muuqaal Qarax gaadhi loo adeegsaday oo labo ruux ku dilay Sacuudi Carabiya
Ugu yaraan labo ruux ayaa ku dhimatay gaadhi ku qarxay magaalada Qatif ee ku tala bariga dalka Sacuudi Carabiya.
Qarax gaadhi loo adeegsaday oo labo ruux ku dilay Sacuudi Carabiya
Muuqaal Haween badan yaa BBC-da u sheegay in la qafalay oo qasab loogu hayay xeryo ku yaalla Soomaaliya
Muuqaal Muuqaalka kenyta ballaaran ee Boni
Muuqaal Trump oo ciyaaraya ciyaar dhaqameedka Sacuudiga
Halkan ka daawo warbixin ku saabsan gabar Soomaaliyeed oo ka hesha guurka nin xaasas leh
Muuqaal Somaliland: Waxaan rajeynaynaa in dib loo billaabo wadahadalladii
Wasiirka arrimaha dibedda ee Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbannaanida ee Somaliland, Dr. Sacad Cali Shire ayaa BBC-da u sheegay in rajeynayo in dib loo billaabo wadahadalla
Muuqaal Jadeecada ka dillaacday Minnesota oo si gaar ah u saameysay Soomaalida
Soomaali badan ayuu soo ritay cudurka jadeecada oo ka dillaacay gobolka Minessota ee dalka Mareykanka. Mas'uuliyiintu waxay sheegeen in Soomaalidu ay ka caga jiidaan talaalka carruurtooda. Halkan ka daawo faahfaahinta.
Jadeecada ka dillaacday Minnesota oo si gaar ah u saameysay Soomaalida
Muuqaal Daawo nolosha mataano 19 sano isku dhagganaa
Laba gabdhood oo mataano ah oo isku dhaggan kuna nool dalka Tanzania ayaa sheegay in ay rajeynayaan inay macallimiin noqdaan ayna hal nin isla guursadaan.
Daawo nolosha mataano 19 sano isku dhagganaa
Muuqaal Daawo: Waxyaabaha looga hadlayo shirka London
Muuqaal Daawo: Ra'iisalwasaare Kheyre oo markab dushii kula kulmay masu'uuliyiin ka tirsan EU
Daawo: Ra'iisalwasaare Kheyre oo markab dushiis kula kulmay masu'uuliyiin ka tirsan EU
Muuqaal Muuqaal ku saabsan dilka wasiir Cabbaas
Aas qaran ayaa maanta lagu wadaa in loo sameeyo wasiirkii wasaaradda Howlaha Guud iyo dib u Dhiska marxuum Cabbaas Cabdullahi Siraaji oo xalay si aan wali sharrxaad buuxda looga bixninin ay askar ka tirsan dowladda tooagsha ugu dileen magaalada Muqdisho.
Muuqaal ku saabsan dilka wasiir Cabbaas
Muuqaal Xanuunka Autism oo ku soo badanaya caruurta Soomaalida ee galbeedka ku nool
Dad badan ayaa takoora ama ceebeeya dadka u baahan waxbarashada gaarka ah ama wax ka qaba dareemayaasha maskaxda, iyadoo waladiin badani ay faquuquid iyo aflgaado dareemaan.
Xanuunka Autism oo ku soo badanaya caruurta Soomaalida ee galbeedka ku nool
Daawo: 100kii maalmood ee ugu horreeyey Trump